Nyocha + Creative = Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi | Martech Zone
Monday, April 20, 2009 Sundaybọchị Sọnde, Ọgọstụ 23, 2009 Douglas Karr
Kedụ njirimara ndị na-eme ka mmadụ nwee ihe ịga nke ọma na mgbasa ozi mgbasa ozi? Ka anyị na-etolite na-arụ ọrụ, anyị na-achọ nkà ma chọọ ngwakọta kwesịrị ekwesị.
Nwa m nwoke bụ nwa akwụkwọ na-asọpụrụ na mgbakọ na mwepụ nors na onye egwu. Nwa m nwanyi bu onye ukwe… na mgbakọ na mwepu. M nnọọ gbasara nyocha… ma n'anya ịbụ ihe m na-ede na imewe. Egwu bụ isi ihe ga-aga nke ọma ma nwa m nwoke ma nwa m nwanyị. Adịghị m onye na-akụ egwu, mana ihe omume ntụrụndụ ndị m na-arụ na-enyere m aka ịga nke ọma. Ekwenyere m na ime ihe okike n'èzí ọrụ gị na-enyere aka mgbe ị na-enyocha ma na-edozi nsogbu na ọrụ gị - na-eduga n'inwe ihe ịga nke ọma gị.
Anaghị m eche banyere onwe m dịka ọkachamara na Social Media mana enweela m ahụmịhe zuru oke na ya iji nyere aka duzie ụlọ ọrụ site na ngalaba m ma nyere ha aka leverage ndị na-ajụ ase ga-etinye aka. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụbọchị ọ bụla m na-arụ ọrụ na ntanetị, nkwupụta okwu, okwu, atụmatụ email na atụmatụ weebụ. Ihe ndi a nile bu ihe okike m.
Ọ bụrụ na m ga-ese oge m, ọ bụ ~ 50% ihe okike na ~ 50% usoro / nyocha. Amaghị m na m nwere ike ịdị ka okike na azịza mụ na ndị ahịa na ndị ọrụ ibe m na-arụ ọrụ ma ọ bụrụ na enweghị m ụzọ mgbapụ nke chọrọ ka m na-eme kwa ụbọchị. Enwere m ekele na a na-ama m aka mgbe niile iwepụta ihe okike - ma ọ bụ njiri mara njirimara onye ọrụ ma ọ bụ okwu na blog na-atọ ọchị.
Dika m na elegara otutu ndi enyi m anya na azumahia a, ha nwere udi ihe okike. Ọtụtụ n'ime ha na-eme ma mmepe na eserese eserese. Fọdụ bụ ndị na-akụ egwu na ndị ọzọ na-ese foto. Ole na ole bụ ndị na-eme egwuregwu… ma ọ bụghị ndị na-eme egwuregwu dị mfe, ha na-acha ọcha mmiri, ndị na-agba ọsọ ma ọ bụ ndị na-agba ọsọ marathon. Enweghị m ike ichepụta ihe okike ọ chọrọ iji mee ka ahụ gị nwee ike ịnagide nsogbu ndị ahụ.
Ọ na-atụ m n’anya mgbe ọ bụla ịnụ ihe ndị enyi m na-eme n’èzí ọrụ. Ọtụtụ ndị folks anaghị amata ọdịiche dị n'etiti akụkụ okike nke ọrụ m na nke nyocha, mana ọ bụ n'ezie ihe m nwere ike ịbanye. Amaara m mgbe m na-eji azịza nke ụdị echiche ọ bụla iji nyere aka dozie nke ọzọ na m ga-eme ya oge niile. Ọ na-achọ omume oge niile na ịhazi ya nke ọma.
99% nke oge, na ahụmịhe m, akụkụ siri ike banyere ihe okike anaghị abịa na ihe ọ nweghị onye cheburu na mbụ. Akụkụ siri ike na-eme ihe ị chere n'echiche. Seth Chinekein
Ọ ga-amasị m maka ndị na-agụ akwụkwọ ozi a ịkekọrịta ihe okike ha yana ma ọ bụ blọọgụ ma ọ bụ kwuo maka otu ọ si emetụta ikike ịme ọrụ ha. Biko kesaa!
Mgbe mbụ m malitere ọrụ m, m ga-eji ụbọchị m na-ede akwụkwọ na ọrụ na-eduzi mgbalị ozi ozugbo. Ụbụrụ ziri ezi. Mgbe ahụ, n'abalị, m ga-ede mmemme nchekwa data iji soro rịzọlt mail maka ndị ahịa m na-anaghị akwụ ụgwọ bụ ndị na-enweghị ike ị nweta ngwugwu ego ahaziri ahazi n'oge ahụ. Ụbụrụ aka ekpe nke ukwuu.
Ka oge na-aga, mgbe m na-etinyechaghị aka n'akụkụ okike nke nzaghachi kpọmkwem, mụ na nwunye m dekọrọ otu eserese eserese maka akwụkwọ akụkọ kwa izu (ụdị Milwaukee nke Chicago's “The Reader,” nke a na-akpọ Milwaukee Weekly). Emere m katuunu niile maka ya.
Ọ bụ ihe na-atọ ụtọ ịhụ ugboro ole m na-agbalị ịgwakọta ụdị omume abụọ ahụ. Ọ bụ otu n’ime ihe mere m ga-eji na-eme ihe m na-eme maka ndụ ọ bụrụgodị na akwụghị m ụgwọ ya.
Daalụ maka iwelite isiokwu a na-atọ ụtọ (nye m opekata mpe!). M na-atụ anya ihe ndị ọzọ na-eme na-akpụ ma ihe ike na nyocha itching!
"M ga-eme ihe m na-eme maka ndụ ọ bụrụgodị na akwụghị m ụgwọ ya." - nke ahụ na-ekwu ya niile, Jeff! Echere m na m nọ n'ọnọdụ yiri nke ahụ… n'agbanyeghị na m ga-eme ihe iji kwụọ ụgwọ ndị ahụ. 🙂
Abụ m onye na-ese ihe n'ụbọchị, mana n'ime ọnwa Jenụwarị-Eprel, ana m arụ ọrụ nke abụọ na-atụ ụtụ isi. Ebe ọ bụ na ha abụọ dị nnọọ iche, anaghị m enwe ike ịgwụ ụbụrụ ka m ga-enwe ọrụ oge nke abụọ na-eme ihe yiri nke m ụbọchị ọrụ.
Mgbe m na-emepụta ihe, iji akụkụ abụọ nke ụbụrụ m na-enyere m aka ịbụ ma ihe bara uru na ihe okike. O mekwara ka m bara uru na ụlọ ọrụ, enwere m ike ịnye echiche ndị nwere ike inyere aka na azụmahịa anyị, ma ọ bụ ntakịrị ihe na-eme ka anyị nwee ihu.
Nke ahụ na-adọrọ mmasị n'ezie - n'ezie na koodu ụtụ anyị, ọ ga-ewe ntakịrị ihe okike (mana ọ bụghị nke ukwuu!).
M na-eji teknụzụ arụ ọrụ, mana abụkwa m onye egwu. Echere m na inwe ike ikwupụta ume egwu m na-enyere m aka ime ka uche m dị ọcha ma na-enyere m aka ịrụ ọrụ nke ọma.